Maxaa sababay qabowga ka jira Kenya? - BBC News Somali
Maxaa sababay qabowga ka jira Kenya?
Aabbo loo haysto dilka labadiisa gabdhood iyo xaaskiisa oo uur leh
Oromo ku dagaalantay deegaanka Gooba
Dadka reer Pakistan oo u dareeray codaynta doorashada
50 qof oo ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo ka dhacay Suuriya
Qarax ka dhacay Pakistan iyadoo dadweynaha ay goobaha codbixinta u dareereen
Posted at 17:33 25 Jul
Posted at 16:29 25 Jul
Deeganno badan oo ka tirsan dunida waxaa ka jiraa kulayl badan balse dalka Kenya waxaa ka jiraa qabow daran, waxaana la sheegay inay ugu wacantahay daruuro aan dhaqaaqaynin oo hawada isku daday.
Bisha July ayaa ah bisha dhaxanta ugu badan laga dareemo gudaha dalka Kenya. Robab ayaa lagu wadaa inay ka da’aan Kenya ilaa bisha June ee sannadka dambe kuwaaso laga yaabo inay saamayn ku yeeshaan dalagga iyo xoolaha.
Dalka Kenya kaliya ah ma ahaan dalalka uu qabowga ka jiro balse dalalka Tazania, Jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo, Malawi, Namibia iyo bariga Zimbabwe ayaa laga dareemay qabowgan mid lamid ah halkaaso uu heer kulka uu hoos u dhacay in ka badan 2C.
Posted at 14:59 25 Jul
Xiriirka kubadda cagta Masar oo soo xulay magacyada afar tababare
Xulka Masar ayaa ku guuldaraystay inuu u gudbo wareegii labaad ee cayaaraha Koobka Adduunka
Xiriirka kubadda cagta Masar ayaa soo magacaabay afar tababare oo la doonaya midkood inuu baddalo tababaraha hadda Argentine Hector Cuper.
Tababaraha xulka masar ayaanan qanddaraaskiisa loo cusboonaysiinin kaddib markii xulka Faraaciinta ay gudbi waayeen wareega labaad ee cayaaraha Koobka Adduunka ee sannadkan 2018-ka.
Afarta tababare ee magacyadooda lasoo xulay ayaa kala ah Jorge Luis Pinto oo u dhashay dalka Colombia, Quique Sanchez Flores oo kasoo jeedo dalka Spain, Javier Aguirre oo u dhashay dalka Mexico iyo Vahid Halilhodzic oo isna kasoo jeedo dalka Bosnia.
Xiriirka kubadda cagta ee Masar ayaa yeelanaya tababare cusub ka hor cayaaraha loogu gudbaya Koobka Qaramada Afrika ee dhacaya 8-da bisha September.
Posted at 14:27 25 Jul
Boqolaal qof oo ka barakacay fatahaado ku dhuftay Nigeria
Boqolaal qof ayaa ka barakacay guryahooda kaddib markii fatahaado ay ku dhufteen magaalada Damaturu oo ku taalla waqooy bari dalkaasi.
Waa fatahaadihii ugu xumaa ee muddo 20 sanno ah halkaasi ka dhaca, sida uu sheegay Muuse Jidawa oo kamid ah saraakiisha ugu sarraysa waaxda ka hortagga masiibooyinka dalka Nigeria oo booqasho ku tegay deegannada ay fatahaadaha saameeyeen.
Warbaahinta maxalliga ayaa ku warrantay in 100 ilaa 200 qoys guryahooda ay biyaha qaadeen.
Posted at 13:36 25 Jul
Bannaanbaxyo ruxay magaalada Timbuktu
Laanta Qaramada Midoobay ee Unesco ayaa u aqoonsatay magaalada Timbuktu inay kamid tahay goobaha taarikhiiga ah ee adduunka
Dhalinyarada carabta ah ee reer Mali ayaa maanta bannaanbaxyo ka dhigay magaalada qaddiimiga ah ee Timbuktu ee dalkaasi. sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxayna ka bannanbaxayeen ammni darrada kasii daraysa ee gobolka ka jirto.
Dibadbaxyada ayaa hakad ku reebay dhaqdhaqaaqa magaalada, waxaana halkaasi lagu gubay baabuur.
Dalka Mali ayaa la filayaa Axadda nagu soo aadan inay ka dhacdo doorasho balse ammni darro ayaa ka jirta waqooyiga dalkaasi.
Posted at 12:38 25 Jul
Qaraxa burbur ayuu dhaliyay, sida ay ku warrantay warbaahinta dowladda Suuriya
Ugu yaraan 50 qof ayaa ku geeriyootay weerar ismiidaamin oo lagu qaaday koonfurta dalka Suuriya, sida ay sheegayaan warar soo baxaya.
Warbaahinta dowladda iyo kooxda la socoto xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in qaraxyo ismiidaamin ah iyo weeraro loo adeegsaday hub ay kadhaceen magaalada Suweyda oo ay gacanta ku hayso dowladda Suuriya
Kooxda la socota xaaladda xuquuqda aadanaha dalka Suuriya oo uu fadhigeedu yahay dalka UK ayaa kusoo warrantay in qaraxyo is xig-xiga ay maanta ka dhaceen magaalada Suweyda, koonfurta caasimadda Dimishiq iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla koonfurta iyo waqooyiga dalka Suuriya islamarkaasna ay maleeshiyaadka dileen dadka qaar ee degenaa tuulooyinkaasi.
Raami Cabdel Raxmaan oo ah madaxa kooxdan ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 32 dagalamayaal oo dowladda taabacsan iyo 22 shacab ah lagu dilay weerar, halka 20 kamid ah kooxda IS la dilay.
Qodabada aad ku maqli doontaan Idaacadda duhurnimo
Posted at 11:51 25 Jul
Qaraxa ka dhacay magaalada Quetta ee dalka Pakistan waxaa sheegtay inay fuliyeen Kooxda IS
Qalalaase ayaa dhacay iyadoo malaayiin qof ay codadkooda ka dhiibanayaan doorashada dalka Pakistan, ugu yaraan 31 qof ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Quetta.
Dhinaca kale, waxaa jiray rabshado uu dhexeeyo shaqaalaha ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalkaasi, waxaana ku dhintay 2 qof halka tiro dad ah ay ku dhaawacmeen.
Sahan la sameeyay ayaa muujinaya in loolanka ugu wayn uu dhexmaraya Cimraan Khaan oo dheeli jiray cayaaraha Kriketka iyo Ra’iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz shariif.
Ololaha doorashada Pakistan waxaa hareeyay qalalaase iyo musuq maasuq.
Ha’yadda xuquuqul insaanka dalka Pakistan waxay sheegtay inay jiraan isku dayo cad oo la doonaya in lagu saameeyo natiijada doorashada.
Posted at 11:32 25 Jul
Masaajid Koonfur Afrika ku yaalla oo looga shakisan yahay in si ula kac ah dab loo qabadsiiyay
Dab ayaa subaxnimadii hore ee saaka qabsaday masaajid ku yaalla magaalo xeebeedka Durban ee dalka Koonfur Afrika, sida ay ku warramayso warbaahinta gudaha.
Dabka ayaa la damiyay, waaxda qaraxyada ee booliiska ayaana goobtii isku gadaamay si aybaaritaan ugu sameeyaan masaajidka Mukhtar ee ku yaalla deegaanka Croftdene.
Saleem Adam oo hoggaamiye diimeed ka ah deegaankaas ayaa warbaahinta Times Live ee dalka Koonfur Afrika u sheegay in ay dad arkeen saddex nin oo darbiga ka soo booday ka dibna sii baxsanaya.
Bishii May ugu yaraan hal ruux ayaa lagu dilay toori ka dib markii toori lagu weeraray masaajid ku yaalla Verulam oo 30km u jirta Durban.
Bishii Juunyana labo nin oo ku sugnaa masaajid ku yaalla Cape Town ayaa toori lagu dilay.
Ma macadda ujeedada laga lahaa weerarkaas.
Wariye ka tirsan warbaahinta Times Live ayaa twitterka soo dhigay muuqaalkan.
Posted at 10:04 25 Jul
Modi oo khudbad taariikhi ah ka jeedin doona baarlamaanka Uganda
Ra’iisulwasaaraha Hindiya Narenda Modi ayaa khudbad u jeedin doona baarlamaanka dalka Uganda, arrintaas oo qayb ka ah booqashada rasmiga ah ee uu dalkaas ku tagay.
Waxay noqon doontaa markii koobaad ee ra’iisulwasaare xil ka haya Hindiya uu khudbad ka jeediyo baarlamaanka Uganda, sida ay muujinayaan Twitter-radan hoos ka muuqda:
Talaadadiina kumannaan ruux oo ka tirsan jahliyada Uganda ee Aasiya ayaa isu soo baxay si ay u soo dhaweeyaan Modi oo isku dayaya in uu hagaajiyo xiriirka ganacsi ee labadaas dal ka dhaxeeya.
Dadka Asalkoodu Hindiya ka soo jeedo ayaa muhiim u ah dhaqaalaha Uganda, arrintaas, waxayna soo xareeyaan kala bar canshuurta dalkaas soo gala inkastoo bulsha dalkaas ku nool ay ka yihin wax ka yar 1%
Modi ayaa Twitterkiisa soo dhigay waxyaabihii uu la qaatay.
Posted at 7:58 25 Jul
Magaalada Gooba oo ka tirsan deegaanka Baali ee dalka Itoobiya waxaa ku dhintay dad gaayraya 10 qof waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ku dhowaad boqol qof.
Dhimashada iyo dhaawaca ayaa ka dhashay ka dib markii ay isku dhaceen dad ka wada tirsan qoomiyadda Oromada.
Isku dhaca ayaa yimid ka dib markii qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Gooba ay burburiyeen taallo ku taalay beer lagu xannaaneeyo dawacada tallaabadaasi oo dadka qaar ay ka saluugeen, sida uu ku soo warramay wariyaha BBC ee Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam.
Posted at 7:20 25 Jul
Israa'iil oo soo ridday diyaarad dagaal oo Suuriya leedahay
Israa'iil ayaa sheegtay in ay toogasho ku soo ridday diyaarad kuwa dagaalka ah oo ay leedahay Suuriya, taas oo gashay hawadeeda - arrintaas ayaana ah dhacdo naadir ah oo dhexmarta labadaas dal ee is haya.
Gantaalo ayaa lagu riday diyaaradda dagaalka ee nooceedu yahay Sukhoi, sida uu Twitterka ku soo qoreen ciidammada difaaca ee Israa'iil.
Sida ay wararka Israa'iil sheegayaan dhacdadaasi waxay ka dhacday buuralayda Golan Heights ee la haysto, mana cadda waxa ay ku dambaysay xaaladda duuliyihii.
Wakaalada wararka Suuriya ee Sana ayaa sheegay in Israa'iil ay bartilmaameedsatay diyaarad ku jirtay hawa Suuriya, balse ma aysan carabka ku dhufanin in gantaallada lala helay.
Posted at 7:16 25 Jul
Fannaanad caan ah oo isbitaal la dhigay
Demi Lovato oo ah gabadh heesaa ah ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla Los Angeles ka dib markii looga shakiyay in ay daroogo iska badisay, sida ay ku warrantay warbaahinta Maraykanka.
Booliiska Los Angeles ayaa Talaadadii ka jawaabay xaalad caafimaad oo degdeg ah oo ka dhacday Hollywood Hills, halkaas oo Lovato ay ku nooshahay.
Barta TMZ ayaa ku warrantay in gabadhan 25 jirka ah la helay iyadoo miyir daboolan isla meeshiina lagu daweeyay, waxaa la siiyay dawooyinka lagula tacaalo dadka daroogada iska badiya.
Posted at 7:13 25 Jul
Codaynta doorashada ayaa ka billaabatay dalka Pakistan ka dib ol’ole doorasho oo ay haraysay walaac laga qabo in wax isdabo marin ay dhacdo iyo rabshado.
Ku dhawaad 106 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan galiyay codaynta xildhibaannada Aqalka Hoose iyo midda gollaha deegaannada.
Xisbiga PTI ee uu hoggaamiyo Imran Khan oo xidig ka soo noqday ciyaaraha kiriketka ayaa rajaynaya in uu ka guulaysto xisbiga PML-N ee ra’iisulwasaarihii hore ee xilka laga tuuray Nawaz Sharif.
Laakiin qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in ay jiraan “isku dayo badan” oo lagu doonayo in lagu farogaliyo doorashada.
Boqolaal kun oo askri ayaa la hawl galin doonaa si ay u sugaan ammaanka goobaha codaynta oo furmay 6:00 subaxnimo ee saacadda Bariga Afrika.
Pakistaan kuma cusba in ay qalalaase siyaasadeed gasho, bilihii u dambeeyayna arrintaas ayaa dhacday.
Ninkii doorashadii hore ku guulaystayna loolankan hadda socda xabsi gudahii ayuu ka daawanayaa, ka dib markii waraaqihii sirta ahaa ee la dusiyay ee Panama Papers ay horseedeen in Shariif xabsi loo dhigo arrimo musuqmaasuq.
Waraysi ay BBC-da Urdugu Isniintii ka qaaday Maryam Nawaz oo ah gabadha ra’iisulwasaarihii hore oo aabaheed lala xiray bishii hore iyada oo loo haysto eedaymo la xiriira kuwa aabaheed ayaa dhaliishay milatariga awoodda badan.
Posted at 7:12 25 Jul
Kulanti wanaagsan dhammaan akhyaarta halkan naga daalacataay, kuna soo dhawaada tabintan tooska ah een ku samaynayno wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka.
Waa maalin Arboco ah ooy taariikhdu tahay 25 Luulyo 2018ka.